Akụkọ - Eziokwu banyere ọkụ na gburugburu ebe obibi
Eziokwu banyere ọkụ gburugburu ebe obibi na n'ichepụta ihe
N’afọ ole na ole gara aga, e mepụtala ọtụtụ ihe ọhụụ n’ọhịa mara mma. Ọ bụghị naanị na anyị nwere ọtụtụ nhọrọ maka nlekọta anụ ahụ dị ọcha na nke na-adịghị egbu egbu, nlekọta ntutu na ihe ịchọ mma, mana anyị na-ahụkwa ụdị ndị na-atụgharị uche ha iji mepụta ngwaahịa na nkwakọ ngwaahịa na-adigide, ma ọ bụ na ha nwere ike weghachite, na-agbanwe ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe Biodegradable.
N’agbanyeghi oganihu ndi a, odi ka enwere otu ihe eji eme mma, obu ezie na obu otu n’ime ihe ndi n’emebi gburugburu ebe obibi: ihe na-egbu maramara. Ewute na-bụ-eji na ntecha na ntu. Ọ ghọkwara ihe a ma ama na ngwaahịa ịsa ahụ, mkpuchi anwụ na nlekọta ahụ, nke pụtara na ọ ga-emecha banye na mmiri mmiri anyị ma mesoo anyị ka ọ na-agbaba n'ime mmiri. Planetwa mebiri nnukwu ihe.
Ọ dabara nke ọma, e nwere ụfọdụ ndị ọzọ na gburugburu ebe obibi enyi na enyi. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ọ gaghị enwe oriri ezumike ọ bụla ma ọ bụ ememme egwu na ọdịnihu dị nso, ugbu a bụ oge dị mma iji gbanwee site na ihe ọkụ ọkụ plastik. N'okpuru, ị ga-ahụ ndu flash ọrụ (mgbe ụfọdụ mgbagwoju anya).
Ruo ugbu a, anyị maara nke ọma nsogbu nsogbu mmetọ zuru ụwa ọnụ na mmetụta na-emerụ ahụ nke plastik na oke osimiri. O di nwute, na ewute hụrụ na nkịtị mma na onye na-elekọta ngwaahịa bụ kpatara.
“Ihe ndozi ọdịnala bụ microplastic, nke amara maka nsogbu ya na gburugburu ya. Ọ bụ obere plastic, ”onye guzobere Aether Mma na onye bụbu onye isi nke ngalaba nkwado mmepe na ngalaba mmepe nke Sephora Tiila Abbitt kwuru. “Mgbe achọtara ụmụ irighiri ihe ndị a na ihe ịchọ mma, a kara aka na ha ga-esi n’okpuru mmiri anyị, na-agabiga n’ usoro nhicha nke ọ bụla, ma mesịa banye na mmiri mmiri anyị na sistemụ oke osimiri, wee si otú a mee ka nsogbu na-arịwanye elu nke mmetọ microplastics. . ”
Ma ọ kwụsịghị ebe ahụ. “Ọ na-ewe ọtụtụ puku afọ iji mebie ma mebie microplastics ndị a. Ha na-ezighi ezi nri ma rie azụ, nnụnụ na plankton, na-ebibi imeju ha, na-emetụta omume ha, na-eduga n'ikpeazụ. . ” Abitt kwuru.
Nke ahụ kwuru, ọ dị oke mkpa maka ụdị iji wepụ ihe na-egbuke egbuke nke sitere na usoro ha wee kwaga na nhọrọ ndị ga-adigide. Tinye ọkụ ọkụ biodegradable.
Dika ichoro ndi na-acho inweta nkwado na nke aesthetics na-aga n’ihu na-eto, a na-achi ahihia maka ihe ndi na emeputa ahihia iji mee ka ngwa ahia ha buru ocha. Dabere na Aubri Thompson, kemistist mara mma dị ọcha na onye guzobere Rebrand Skincare, e nwere ụdị abụọ nke "eco-friendly" na-egbukepụ egbukepụ na-eji taa: osisi na-adabere na ịnweta. O kwuru, sị: “Ihe ọkụkụ ndị e wetara na mbara ala na-enweta cellulose ma ọ bụ ihe ndị ọzọ a pụrụ iji mee ka ọ dịghachi ọhụrụ, e mesịa, a pụrụ ite ha ma ọ bụ mịa ha iji rụpụta ihe ndị tụrụ àgwà.” “Mgbuke sitere na mineral na-esite na mica mineral. Ha nwere Ọ bụ dị egwu. Enwere ike ịmepụta ma ọ bụ mepụta ha n'ime ụlọ nyocha.
Agbanyeghị, usoro ọdịnala ndị a na-egbu maramara adịchaghị mma maka ụwa, na nke ọ bụla nwere mgbagwoju anya nke ya.
Mica bụ otu n'ime nhọrọ ịnweta kachasị n'ọtụtụ ebe, na ụlọ ọrụ dị n'azụ ya bụ ọchịchịrị. Thompson kwuru na ọ bụ ezie na ọ bụ, ọ bụ ihe okike nke na-anaghị eme ka microplasticity nke ụwa, mana usoro ngwuputa n'azụ ya bụ usoro ike siri ike nke nwere ogologo oge nke omume na-adịghị mma, gụnyere ọrụ ụmụaka. Nke a bụ ihe mere ụdị dị ka Aether na Lush ji amalite iji mica sịntetik ma ọ bụ sịntetik fluorophlogopite. Nke a laabu-mere ihe a na-atụle mma site ịchọ mma mgwa ihe review ọkachamara panel, na bụ purer na chawapụrụ karịa eke mica, n'ihi ya, ọ na-aghọ ndị ọzọ na-ewu ewu.
Ọ bụrụ na ika ahụ na-eji mica okike, chọọ (ma ọ bụ jụọ!) Iji kwado usoro izizi ya. Ma Aether na Beautycounter kwere nkwa na ha ga-enweta mica dị mkpa mgbe ha na-eji ihe ndị sitere n'okike, ndị nke ikpeazụ a na-arụsi ọrụ ike iji mepụta mgbanwe dị mma na ụlọ ọrụ mica. E nwekwara nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ịnweta ịnweta, dị ka sodium calcium borosilicate na calcium aluminum borosilicate, nke a na-eji obere flakes iko flaros na-echekwa echekwa nwere mkpuchi ịnweta ma jiri akara dị ka Rituel de Fille na-eji ihe ịchọ mma.
A bịa n'ihe na-egbuke egbuke n'ihe ọkụkụ, a na-ejikarị osisi eme ihe na-egbuke egbuke na ngwaahịa gel "biodegradable" taa, ọnọdụ a na-adịwanye mgbagwoju anya. A na-esite na osisi hardwood dị ka eucalyptus na cellulose ya, mana, dị ka Thompson si kọwaa, ọ bụ naanị ụfọdụ ngwaahịa ndị a na-emebi emebi n'ezie. Ọtụtụ plastik ka nwere obere plastik, a na-agbakwụnye ya dị ka agba na mkpuchi na-egbukepụ egbukepụ, a ga-arụkwa ya n'ụlọ ọrụ iji rekasịa kpamkpam.
Abịa n’ihe na-egbu maramara bụ ihe na-emebi emebi, mkpocha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ịre ahịa aghụghọ bụ ihe a na-ahụkarị n’etiti ndị mara mma na ndị na-emepụta ngwaahịa ka ngwaahịa dị mma karịa gburugburu ebe obibi karịa ka ha dị. "N'ezie, nke a bụ nnukwu nsogbu na ụlọ ọrụ anyị," ka Rebecca Richards kwuru, onye isi okwu nkwukọrịta nke (n'eziokwu) bioGoldz flash brand brand BioGlitz. “Anyị zutere ndị na-emepụta ụlọ na-agha ụgha na-ekwu na ha na-egbu maramara na-emebi emebi, mana n'ezie, ha mere ihe na-egbuke egbuke nke na-eme ka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe. Nke a abụghị ihe ngwọta n'ihi na anyị maara na ntụ na-egbukepụ egbukepụ agaghị enwe ike ịbanye n'ọhịa ụlọ ọrụ Compost. "
Ọ bụ ezie na "compostable" na-ada ka ezigbo nhọrọ na mbụ, ọ na-achọ onye wearer ka ọ chịkọta niile ji ngwaahịa tụrụ na mgbe ụgbọ mmiri ha-ihe nkịtị flash Fans apụghị ime. Na mgbakwunye, dị ka Abbitt kwuru, usoro ịkọkọ ngwaahịa ga-ewe ihe karịrị ọnwa itoolu, ọ fọkwara nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịchọta ụlọ ọrụ nwere ike ịkọkọ ihe ọ bụla n'oge a.
"Anyị anụkwala banyere ụfọdụ ụlọ ọrụ na-azọrọ na ha na-ere ezigbo ihe na-egbu maramara, mana ha na-agwakọta ha na ihe ndị na-egbuke egbuke plastik iji belata mmefu, yana ụlọ ọrụ ndị na-azụ ndị ọrụ ha ịkọwa ihe ndị na-egbu maramara ha dịka ihe" emebi ". Kacha ụma na-emegharị ndị ahịa anya nwere ike ha agaghị ama banyere “plastik niile na-emebi emebi, nke pụtara na ọ ga-agbari n’ime obere plastik. “Richards kwukwara.
Mgbe enwetara aka na akụkọ banyere ọtụtụ ụdị, o juru m anya ịchọpụta na nhọrọ kachasị ewu ewu nwere obere plastik na ọ bụ naanị na mbụ ka ọ dị na ndepụta "ngwaahịa kacha mma biodegradable ewute", mana plastik ndị a adịkarịghị ere. Ejiri dị ka ihe na-emebi emebi, ụfọdụ gbanwere ọbụna dị ka ngwaahịa na-enweghị plastik.
Agbanyeghị, akara a anaghị adị njọ mgbe niile. Thompson kwuru, sị: "N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a bụ n'ihi enweghị ozi karịa obi ọjọọ." “Branddị na-ebufe ndị ahịa ha ozi, mana ụdị anaghị enwe ike ịhụ mmalite na nhazi ngwa ọrụ. Nke a bụ nsogbu maka ụlọ ọrụ dum ruo mgbe akara Ọ nwere ike idozi naanị mgbe achọrọ ndị na-eweta ngwaahịa iji nye nghọta zuru oke. Dị ka ọkụ eletrik, ihe kasị mma anyị nwere ike ime bụ ịchọ asambodo na email ụdị maka ozi ndị ọzọ. ”
Otu akara ị nwere ike ịtụkwasị obi na biodegrade n'onwe ya bụ BioGlitz. Ebube ya sitere n'aka onye nrụpụta Bioglitter. Dabere na Richards, akara a bụ naanị ihe na-egbu maramara n'ụwa. The sustainably egbute eucalyptus cellulose na-enwe n'ime ihe nkiri, dyed na eke ịchọ mma pigments, na mgbe ahụ kpomkwem bee n'ime dị iche iche urughuru nha. Brandsdị osisi ndị ọzọ na-ewu ewu na-ewu ewu nke nwere ike ịmepụta kpamkpam (ọ bụ ezie na o doro anya ma ọ ga-eji Bioglitter) gụnyere EcoStardust na Sunshine & Sparkle.
Yabụ mgbe a bịara n'ihe ọkụ ọkụ niile, nke nhọrọ kachasị mma? Richards kwusiri ike, sị: “Mgbe ị na-atụle ihe ngwọta ga-adịgide, ihe kasị mkpa bụ ileba anya n'usoro mmepụta niile, ọ bụghị nanị nsonaazụ ikpeazụ.” N'iburu nke a n'uche, biko gosipụta nghọta banyere omume nke gị ma nwee ike ikwenye na ngwaahịa ha dị. Zụọ ahịa ebe ahụ maka ụdị ebumnuche biodegradable. N'ime ụwa ebe ọ dị mfe ịchụso ibu ọrụ nke ọma site na mgbasa ozi mmekọrịta, anyị ga-ekwurịrị gbasara nchegbu na ihe anyị chọrọ. "Ọ bụ ezie na ọ bụ ọrụ siri ike ịchọpụta ngwaahịa ndị na-adịghị emerụ ahụ na mbara ala anyị, kama ị na-azọrọ ngwaahịa ndị na-abụghị maka ebumnuche ahịa, anyị na-agba ndị ahịa niile chọrọ ịmata ihe ma na-echebara echiche echiche ka ha gaa miri Mụọ ụlọ ọrụ ha na-akwado, jụọ ajụjụ, atụkwasịkwala obi na nkwado ndị a na-ekwu n’elu. ”
Na njedebe ikpeazụ, ihe kachasị mkpa bụ na dị ka ndị na-azụ ahịa, anyị anaghịzi eji ihe eji eme ihe na-acha ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, anyị aghaghị ị paya ntị na ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa anyị na-azụkarị. Thompson kwuru, sị: “Echere m na ụzọ kachasị mma bụ ịjụ onwe gị ụdị ngwaahịa ọ ga-adị mkpa ịnwe ihe na-egbuke egbuke. “N'ezie, enwere ụfọdụ ngwaahịa agaghị adị otu ma ewezuga ya! Ma iwelata oriri bụ akụkụ ọ bụla nke ndụ anyị. Ọganihu kachasị adigide nke a ga-enweta. ”
N’okpuru, ngwa ahia kachasị amasị anyị nke ị nwere ike ịtụkwasị obi bụ nhọrọ ka mma ma mara amara maka ụwa anyị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ka ọmụmụ ihe dị ndụ ọhụrụ gị dị ọhụrụ mana ọ nwere obi abụọ, BioGlitz’s Explorer Pack nwere ike ime ihe ị chọrọ. Nke a set nwere ise karama plastic-free eucalyptus cellulose ewute na agba dị iche iche na nha, nke zuru okè maka ojiji n'ebe ọ bụla na anụ. Dị nnọọ arapara ika si algae dabeere na Glitz Glu ma ọ bụ ndị ọzọ na ntọala nke ị na-ahọrọ. Ohere ya enweghị njedebe!
Rituel de Fille, ihe eji eme ka ihe nhicha ahụ dị ọcha, ejibeghị ihe na-egbuke egbuke na nke ọzọ candies, kama ịhọrọ shimmer dabeere na ịnweta sitere na iko borosilicate anya na mica synthetic. Enwere ike iji soot nke ihe dị egwu na mbara igwe na-agbakwunye n'akụkụ ihu (ọ bụghị naanị anya).
Kemgbe 2017, EcoStardust nke dị na UK na-emepụta ihe ọkụkụ na-emepụta ihe ọkụkụ nke sitere na cellulose, bụ nke sitere na osisi eucalyptus toro ogologo. Usoro ohuru ya, Pure na Opal, enweghi 100% plastic, ma nwalere ka ha ghapuchapu na mmiri ohuru, nke bu ihe kachasi ike na gburugburu ebe obibi. Ọ bụ ezie na ngwaahịa ochie ya nwere naanị 92% plastik, ha ka nwere ike ịdị ukwuu (ọ bụ ezie na ha ezughi oke) na-emebi emebi na gburugburu ebe obibi.
Maka ndị chọrọ ịbụ ntakịrị mgbu ma na-ejighi oke eme ihe, biko tụlee egbugbere ọnụ a na-egbukepụ egbukepụ na nke na-atọkarị ụtọ site na Beautycounter. Ọ bụghị naanị akara a na-ahụ maka mica sitere na ihe na-egbuke egbuke nke plastik maka ngwaahịa ya niile, kamakwa ọ na-agbasi mbọ ike ime ka ụlọ ọrụ mica nwee ohere nghọta na ụkpụrụ omume.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị naghị amasị sacha, ị nwere ike zuru ike na sachaa na bat. N’ezie, dị ka ite mmiri anyị, ebe ịsa ahụ anyị na-alaghachi na mmiri mmiri, yabụ ọ dị mkpa iburu n’uche ụdị ngwaahịa anyị ji ata mmiri maka otu ụbọchị. Lush na-enye ngwaahịa ahụ ihe na-egbuke egbuke nke mica sịntetik na borosilicate kama nchapụta nke mica eke na plastic gloss, yabụ ị nwere ike iku ume ngwa ngwa n'ihi na ị maara na oge bat abụghị naanị gburugburu ebe obibi, kamakwa ụkpụrụ.
Na-achọ sleek ewute, ọ bụghị dwarf ewute? Aether Mma nke Supernova nke dị elu bụ impeccable. Mkpịsị odee na-eji mica na-eme omume na ọla edo na-acha odo odo iji mee ka ìhè ọla edo ụwa dị.
N'ikpeazụ, ihe na-eme ka sunscreen ngwa na-atọ ụtọ! A na-etinye SPF 30 + nke na-enweghị mmiri na-edozi ahụ na botanical na-edozi ahụ, antioxidants na ọgwụ dị mma nke na-egbuke egbuke kama plastik. Akara ahụ egosila na ihe na-egbuke egbuke ya bụ 100% nke nwere ike ibibi, nke sitere na lignocellulose, ma nwalela onwe ya maka mmebi na mmiri ọhụrụ, mmiri nnu, na ala, yabụ ọ na-adị mma mgbe etinye ya na akpa osimiri.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwadebe mbọ gị maka ezumike, tụlee iji ihe eji eme njem ezumike ọhụụ si na mbọ aka dị ọcha Nailtopia. Dika akara a gosiputara, ihe nile na-egbuke egbuke nke ejiri agba ndi a bu 100% ihe eji ebipu ma o nweghi plastic. Nwere olileanya na onyinyo ndị a na-agbanwe agbanwe ga-adịgide adịgide n'ime akara akara ahụ.
Post oge: Jan-15-2021